SingForYou.net - Ma Tway Kya Yin Akaung Thar
Ma Tway Kya Yin Akaung Thar
Tags : ရွှေဘုံမင်းသမီးလေးကိုမှ..ကိုကလိုချင်..:)
By : chittatthu on Jan 20, 2010
Score: 90 Rating: 5.00 Comments: 42
Ma Tway Kya Yin Akaung Thar's Description
singforyouမှသူငယ်ချင်းအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်မျာ ကျွန်တော်ဒီသီချင်းလေးကိုဆိုဖို့ရာကိုကျွန်တော် 4ရက်လောက်စောင့်ရပါတယ်ကျွန်တော်ကွန်ပျက် သွားလို့ပါ...အဲဒိအတောအတွင်းမှာသူငယ်ချင်းတို့ ဆိုးထားတာတွေကိုလည်းကွန့်မန့်မပေးလိုက်နိုင်တာ ကိုခွင့်လွတ်ပါခင်မျာ...အခုဒီသီချင်းလေးကိုအခု လို4ရက်မြောက်နေ့မှဘဲတင်လိုက်ပါတယ်..သူ ငယ်ချင်းအားလုံးအားပေးကြမယ်လို့မျှော်လင့် ပါတယ်ခင်များကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်မျာ...
forevermoe on Jan 23, 2010 0
mingalar par shinnn...d ta chin lay ko so po4yat lout wait lite ya lo larr ma thi ...po kg nay tal..ta kal pyaw tar norr..myout pyaw chin lone wa ma hote parr ...comment shay shay yay par so lo ..yay chin tar twe yay twer par tal shinn..:P just kidding parr ...ma moe arr pay twer tal nor ..*******************************************:)
chittatthu on Jan 24, 2010 0
ဟုတ်ကဲ့ပါငါ့အစ်မရေ...အမြဲအားပေးပီးကွန့်မန့်အရှည်ကြီး ရေးပေးတဲ့အတွက်အမြဲကျေးဇူးတင်လျက်ရှိပါတယ်ခင်မျာ... နောက်လည်းအားပေးအုံးနော်ငါ့အစ်မ....
yeyintaung86 on Jan 21, 2010 0
အားပေးသွားပါတယ်ဗျာ..အချိန်မရလို့ ကွန့် မန့် အရှည်ကြီးမရေး ပေးနိုင်တာကိုနားလည်ပေးပါ..အမြဲအားပေးနေပါတယ်....
chittatthu on Jan 21, 2010 0
ကျေးဇူးပါအစ်ကိုကြီးရေညီလေးနားလည်ပါတယ်..အစ်ကိုကြီး တို့စာမေးပွဲတွေဖြေနေတယ်ဆိုတာ...မနေ့ကအစ်ကိုကြီးဆို သွားတာအရမ်းကောင်းတယ်တကယ်ပါ...နောက်လည်းဆိုအုံး မယ်မလားအားပေးမယ်နော်အစ်ကိုကြီးရေ..........:)
tharnge123 on Jan 21, 2010 0
A yan kaung tal bro yay. Mite pa,**********************************
thureaim on Jan 21, 2010 0
mike tal brother carry on I never comment everyone except good one
ဟဟဟဟဟုတ်လားအဲဒါဆိုကျွန်တော်ဆိုတာကောင်းတယ် ပေါ့နော်..ဟီးဟီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုthureaimရေနောက် လည်းအားပေးပါအုံးဘရားရေ
kounghtetsan on Jan 21, 2010 0
မင်္ဂလာပါချစ်ညီလေး.. စာမေးပွဲတွေပြီးသွားပြီဆိုတော့.. ဟဲပြီပေါ့.. အစ်ကိုနောက်ကျသွားတယ်ကွာ.. ဟီးးးးးးး.. စောရီးနော်.. ညီလေး.. အစ်ကိုတို့က မပြီးသေးတော့.. နားလည်ပေးကွာ.. ပိုပိုကောင်းလာတယ်ကွာ.. ငါ့ညီက.. အားပေးသွားပါတယ်.. ချစ်ညီလေးရေ.. 5********** ခင်မင်လျှက်.. ကောင်းထက်
ကျေးဇူးပါအစ်ကိုကြီးရေညီလေးကိုအခုလိုအားပေးသွားတာကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အစ်ကိုကြီးလည်းမဆိုတာကြာပီ နော်စာမေးပွဲပီးရင်တော့ဆိုမယ်ထင်တယ်..စောင့်နေမယ်နော် အားပေးလျက်ပါအစ်ကိုကြိးရေ.....
sithunaung on Jan 21, 2010 0
~~~ so nice to listen brother.. arr pay twer per tal..5 ****** for you :)))
ကျေးဇူးပါကိုsithunaungရေအခုလိုအားပေးတဲ့အတွက်အရမ်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ...ကျေးဇူးပါနောက်လည်းအားပေးအုံး နော်...:)
yizaw on Jan 21, 2010 0
လူကိုစောင်းဆိုနေတာလား?သိတယ်နော် ဟိဟိ နောက်တာ ၅ စတားပဲ ဆရာရေ
ဟုတ်တယ်ဗျာသူငယ်ချင်းလေးကိုစောင်းဆိုထားတာပါဗျာ... တကယ်ပါဗျာ...:Pအခုလိုအမြဲတမ်းအားပေးလျက်ရှိတဲ့ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းလေးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမာခံပ၇ိသတ်လေး...ကျေးဇူးပါ
paradise on Jan 21, 2010 0
မဖြစ်ဘူးဆိုတာ မရှိ ..မရှိသေးတာပဲရှိပါတယ် ဟိဟိ.....ဆိုသွားတာ အတော်လေးကို ကောင်းလှပါတယ် "ချစ်သူ" နဲ. ညီအစ်ကိုလားဟင်. :P......အားကြီးကောင်းတယ် .....*****
ဟဟဟကျေးဇူးပါခင်မျာအခုလိုအားပေးသွားတဲ့မparadiseကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လည်းအားပေးပါအုံးသူငယ်ချင်း ရေ..ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်နဲသံစဉ်ချစ်သူကညီအစ်ကိုလို့လည်း ပြောလို့ရတယ်ဗျဘာလို့လည်းဆိုတော့သူနဲ့က6နှစ်ကျော်ပီ အတူတူနေအတူတူကျောင်းတက်လာတာတွေလေ...နေရင်တောင်ကုတင်ချင်းကပ်ရပ်နေတာ...ညီအစ်ကိုလို့ပြောရင်မမှားပါဘူးဗျာ...:)
susannyunn on Jan 21, 2010 0
shwe bone mintamee lay ko ma lo kyin yin tot....innn....mawwwwwwwww ya mel nawt....:)))))))))))))).... lar yout arr pay nar sin thwar par te......bravoooooo....:clap :clap :clap..>>>>
ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ရွှေဘုံမင်းသမီးလေးကိုမှလိုချင်တာဗျာ မောရင်လည်းမောပါစေဗျာ..ဟီးဟီး....အခုလိုအားပေးသွားတဲ့ ညီမငယ်susannyunnကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ....
jedi on Jan 21, 2010 0
gd tae bya
nanwai on Jan 21, 2010 0
ဂွတ်တယ်။ တကယ်မိုက်တယ်ဗျ လေးရက်တောင်စောင့်လိုက်ရတယ်ဆိုပါတော့ 5* ဗျို့။ ခင်မင်လျှက်
ဟုတ်လားတကယ်ကိုဂွတ်တာလား..မိုက်တော့မိုက်ဘူးဗျ...ဟီး ဟီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မnanwaiရေနောက်လည်းအားပေး အုံးမှာမလား..အားပေးအုံးနော်ဟီးဟီး...ကျေးဇူးတကယ်တင်ပါ တယ်သူငယ်ချင်းရေ
hippo on Jan 21, 2010 0
ဟုတ်ကဲ့ အားပေးပါတယ်ရှင် ***** နဲ့
အားပေးသွားတာကွန့်မန့်နှစ်ခုကြီးများတောင်နော်...အခုလို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲအားပေးသွားတာကိုကျေးဇူးအများကြီးတင် ပါတယ်ဗျာ.....နောက်လည်းအားပေးပါအုံးမhippoရေ...
chan2008 on Jan 21, 2010 0
အော်... ကောင်းပါ့ကောင်းပါ့ အားပေးသွားပြီဗျာ... ချမ်း၂၀၀၈
ဟုတ်ကဲ့ပါခင်မျာ..အားပေးမှုကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. တကယ်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုထားတာလေးက ဟီးဟီးကျေးဇူးပါchan2008ရေနောက်လည်းအားပေးပါအုံးဗျာ
chawlay on Jan 20, 2010 0
ayan kg par tal...takal kg par tal....po po taw lar par tal
ဟုတ်လားအားမပေးတာကြာပီနော်နောက်လည်းအားပေးပါအုံး ကွယ်အမြဲတမ်းကြိုဆိုလျက်ပါ...အခုလိုအားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်...:)
SKB on Jan 20, 2010 0
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ရွှေဘုံမင်းသမီးလိုချင်ရင်တော့ ရွှေဘုံပေါ်သာတက်နေဗျာ ကွန်ပျူတာ ပျက်တာရောဟုတ်ရဲ့ လားဗျာ အခု ဒီသီချင်းကို ဆိုတာ ဒီလောက်ကောင်းနေတာ ကြိတ်ပြီးကျင့်နေတာမဟုတ်ဘူးလား ရွှေဘုံမင်းသမီးတော့ မရရင်နေပါစေဗျာ ကျွန်တော့်ကောင်မလေး တစ်ယောက်ပဲရရင်တော်ပါပြီ ဟီးဟီး
ဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟကိုSKBပါ့လားနာမည်ကတော့အလန်းနော်အခုစာမေးပွဲ တွေပီးသွားပီဆိုတော့သီချင်းတွေဆိုအုံးမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လား ဆိုးပါဗျာတကယ်ကို..ကိုSKBဆိုးထားတာအရမ်းသဘောကျ တယ်ဗျ..နောက်ပီးအခုလိုကျွန်တော့်ကိုအားပေးကွန့်မန့်အရှည် ကြီးရေးသွားတာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ
pp01 on Jan 20, 2010 0
min galar par shin..:OOOO kg mha kg par shint:D************
ကျေးဇူးနော်မpp01ရေအခုလိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ နောက်လည်းအားပေးအုံးမယ်မလား..ကျေးဇူးအများကိုတင် ပါတယ်ခင်မျာ...တကယ်ပါ
turikimuriki on Jan 20, 2010 0
a yan nice par tel shin... arr pay thwar pi... 5* :))
ဟုတ်ကဲ့ပါမturikimurikiရေအခုလိုအမြဲအားပေးလျက်ရှိတဲ့ စစ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်မျာ...ကျွန်တော်ဆိုထားတာက တော့စစ်လိုပြိုင်ပွဲတော့ဝင်လို့အဆင့်မမှီဘူးဟီးဟီး....နောက် လည်းအမြဲအားပေးပါအုံးနော်..ကျေးဇူးပါ
Ilovemusic on Jan 20, 2010 0
wat kam gyi nae...hel htar ka tae ka...a yann narr htaung kg nay ter....par lo...delete loat lite ter lal...?? arr pay ma lo har....taw thay tel..a khu...pyan so lo....really nice to listen par...perfect singing...good shal gyi pel...5*4u nor.
ဘာရားရေဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်ဝပ်ကန်နဲဆိုထားတာကို မကြိုက်လို့ပါ...ဝပ်ကန်ကြီးနဲဆိုထားတော့ဆိုနေကြမဟုတ် တော့နည်းနည်းလေးရှက်လို့ပါ...အခုလိုအားပေးသွားတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုIlovemusicရေနောက်လည်းအားပေး မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာ.....:)
thant on Jan 20, 2010 0
song lay nae......athan lay nae......aso lay nae.....kwet ti par bal.....ayann kg par tal chitatthu yay.....*******
chittatthu on Jan 20, 2010 0
အစ်မရေအခုလိုအားပေးတာကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အစ်မရေ..နောက်လည်းအားပေးအုံးနော်...ဟီးဟီးအသံကတော့ သိပ်မထွက်ဘူးဗျာ...သည်းညည်းခံပီးနားထောင်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
ngwesele on Jan 20, 2010 0
ayan pel kg par tal shin..**** trway pay twar par tal....
အခုလိုအားပေးသွားတယ်မngweseleကိုကျေးဇူးအများ ကြီးခင်ပါတယ်ခင်မျာ..နောက်လည်းအားပေးမယ်လို့မျှော်လင့် ပါတယ်....တကယ်ကိုလှိုက်လှိုက်လှဲလှဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်